Brave Private Browser အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（96.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Brave Private Browser: Secure, free web browser
အင်တာနက်ကိုသီးသန့်ရှာဖွေပါ။ အခမဲ့အတွက်! Brave Private Browser အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏အစာရှောင်ခြင်းနှင့် private browser ad browser နှင့် pop-up blocker နှင့်သင်၏အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာရှင်များ, malware နှင့် pop-ups များမှရှာဖွေခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ကိုဖွင့်ပြီးရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်း။
ယနေ့ Android အတွက်အကောင်းဆုံး adblock private web browser app ကို download လုပ်ပါ။
ပြင်ပ plugins များသို့မဟုတ်ချိန်ညှိချက်များမရှိပါ။ Brave Privacy Browser သည် Android အတွက်အလုံခြုံဆုံး, လျှပ်စီးမြန်သောအင်တာနက် browser ကိုပေးသည်။ Popups မပါဘဲအခမဲ့ပုဂ္ဂလိကရှာဖွေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသုံးပါ (pop blocker), ကြော်ငြာများ (ကြော်ငြာ blocker), malware နှင့်အခြားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကြော်ငြာများကိုပိတ်ဆို့ရန်အခမဲ့ adblocker ကိုပိတ်ဆို့ရန်အခမဲ့ ADBLOCKER ကိုပိတ်ထားပါ။ Incognito ပုဂ္ဂလိက browsing အတွက်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကရှာဖွေခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင် tabs များကိုပြုလုပ်ပါ။ သင်၏သမိုင်းကိုမသိမ်းဆည်းဘဲအင်တာနက်ကိုရှာဖွေပါ။
brave သည်မြန်သော web browser ဖြစ်သည်။ Brave သည် Page Loading Times ကိုလျှော့ချသည်, ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီး malware ကူးစက်ခံထားရသောကြော်ငြာများကိုပြုလုပ်သည်။ Brave Privacy app သည် Android တွင် 2x မြန်နှုန်းမြင့်တက်မှုကိုပြသပြီးသင်၏ဘက်ထရီနှင့်အချက်အလက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်သောအင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။
b >> browser app-b>
အခမဲ့ built-in adblocker (pop blocker) နှင့်အတူဒီဇိုင်း။ သတ္တိရှိသောအခမဲ့ ADBLOCKER သည်သင့်အားသင်၏ privacy နှင့် private browsing history ားကိုရှာဖွေနေသည့်အတွက်သင့်ကိုခြေရာခံသည့်ကြော်ငြာများမှကာကွယ်ပေးသည်။
အလိုအလျောက် privacy - Adblock browser propery
breave private browser app သည်သင့်အား ဦး ဆောင်နေသည့် privacy နှင့် security feace appears (encrypted data traffic), script ပိတ်ဆို့ခြင်း, တတိယပါတီက cookie ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း (adblock) နှင့် Incognito သီးသန့် tabs များ။
Free Ingognito Private Internet browser
POP Blocker (Blocks Ads)
* လုံခြုံစိတ်ချရသောပုဂ္ဂလိက browsing
* data data add-free web browser
* နေရာတိုင်းတွင် HTTPS (script blocker)
browsing histress * * browsing histress
DuckduckGo ကို အသုံးပြု. ပုဂ္ဂလိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်>
အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်ကြော်ငြာ0င်ငွေများစိုက်ပျိုးနေစဉ်လုံခြုံစိတ်ချရသော, ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဘရောက်ဇာ။ ရဲရင့်သောအွန်လိုင်း ad ဂေဟစနစ်ကို Micropayments များဖြင့်အွန်လိုင်း ad ဂေဟစနစ်များနှင့်0င်ငွေခွဲဝေမှုအသစ်များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ အသုံးပြုသူများနှင့်ကြေညာသူများအားပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်အတွက်ပိုမိုတောက်ပသောအနာဂတ်အတွက်လမ်းဖြစ်သည်။
Brown-in Adm block လုပ်ပြီး broket-tracking နှင့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဖွင့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု. www.braven.com သို့သွားပါ။
မေးခွန်းများ / အထောက်အပံ့
Community.BrSward.com/c/support-and-troublebleshooting/mobass-support တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ထံမှကြားနာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ကြသည်။
သင်၏မြန်ဆန်စွာအင်တာနက် browser ကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု. အမေရိကန်5ပွင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ယနေ့ Android အတွက်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအက်ပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေပါ။
Brave Private Browser - Secure, free Web Browser 2021